China Mirayiridzo yekuchengetedza uye kushandiswa kwechigadzirwa Kugadzira uye Fekitori | Teng'an
Aluminium poda poda chigadzirwa tsananguro
Iro zita rezvigadzirwa imvura-yakavakirwa aruminiyamu poda yekumisikidza yeakisi krete, inova gasi rinogadzira mumiriri wekonati ine mweya. Basa rekrete ine aerated ndeyekuita nemakemikari nesilica quicklime mune iyo slurry kuburitsa gasi uye kuumba yakanaka uye yunifomu matema, ichiita iyo aerated kongiri ive ine porous chimiro.
Ichi chigadzirwa chigadzirwa chekunamatira chine chinodzivirira chinodzivirira, muchimiro chepellet inonyorova, uye ine yakakosha antioxidants uye inoparadzira aids. Inofananidzwa nealuminium poda, hazvisi nyore kuburitsa guruva, haigadzikise magetsi, haityi hunyoro, iri nyore kune huremu hwekuyera, uye ine imwe fosi yekudzikamisa basa. Icho chakachengeteka uye chine hupfumi chigadzirwa chitsva chegassing.
Kuti uve nechokwadi chekushandisa chaiko kwechigadzirwa ichi, ndapota cherekedza:
1. Chigadzirwa chinofanira kuchengetwa mune yakaoma, inotonhorera uye inotonhorera imba yekuchengetera;
2. Inofanirwa kuve yakasarudzika kubva kumvura, acid, alkali, zvigadzirwa zvinokanganisa, sosi inopisa, sosi dzemoto, nezvimwe, kudzivirira kukanganisa kukonzeresa kwayo gassing;
3. Chigadzirwa chinofanira kushandiswa nekukasira kana chikashandiswa, uye chinofanira kuvharwa munguva mushure mekuchiburitsa kunze kuti chisasanganisa zvimwe zvinhu zvekunze;
AAC aruminiyamu poda kuva tsvukuruka, flake upfu, kusimba kugadzira inogadzirwa chicherwa solvent, inokosha mvura solvent, surfactant. Kuva nechimiro chekushanda kwakadzikama, chiitiko chepamusoro, chiri nyore kushandisa, chiri nyore kumisikidza hunhu mumvura, zvinobatsira pakugadzira kongiri yekukanda kugadzirwa, mune yakadzika-tembiricha, uye kutonhora, mushure mekunyungudutsa aruminiyamu indekisi isina kuchinjika, chiitiko ndicho chakanakisa yekuwedzera uye inopupuma mumiririri wesilicate chigadzirwa, general index inosvika kana kupfuura nyika JC / 407-2000 Executive standard.
Iyo aluminium poda poda inoshandiswa kune AAC block indasitiri. Nemvura inogadziriswa uye yekunamatira mhando, zviri nyore kuwedzerwa muAAC block yekugadzira muchina, ine mashoma kusvibiswa pane zvakatipoteredza. Kunze kwezvo, iyo aruminiyamu poda poda inogadzirwa neyedu yekugadzira muchina ine yakakwira aruminiyamu chiitiko uye nekukurumidza bvudzi gasi chiyero, uye chidimbu saizi inogona kuitwa uye kugadziridzwa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi.
Pashure: Nezve zvigadzirwa zvekugadzira
Zvadaro: Iko kukanganisa kwealuminium poda pane aerated kongiri
aruminiyamu namira kongiri
aruminiyamu namira kwechiedza bharoka aac
zvemukati aluminium poda